Amanqaku eKlout abuyiselwe kwakhona ... kwaye ndiyayithanda! | Martech Zone
Ndakhe ndeva malunga Klout Okwethutyana elidlulileyo kodwa khange ndihoye kakhulu de ndadibana neqela leKlout eLas Vegas. Ndivavanye kwaye ndafumanisa ukuba amanye amanqaku ebengenanto. Umzekelo, uninzi lwethu lwalunamaphepha amaninzi, iiakhawunti ezininzi, kunye nembali ekwi-intanethi eyadlula iminyaka elishumi… kodwa iKlout ayichaphazekanga kuko konke oko.
Ixesha lokugqibela uKlout ehlaziya inqaku, bandilahlile ngokupheleleyo. Amanqaku achukunyiswe ngokungqalileyo yimisebenzi yamva nje… nangaphezulu kunokuba kwakunjalo ngaphambili. Ukuhla kwamanqaku kwam bekungandifundisi nantoni na ngokunxibelelana noluntu. Ndiyekile ke ukubukela.
Klout Ndigqibile uhlaziyo olukhulu lwenqaku kwaye bendidlala ngalo ukusukela oko bayisungulayo. Ndijonge phezulu, ndibeke iliso kuthungelwano lwam, kwaye bendisebenzisa i-Klout usetyenziso lwefowuni yonke imihla (kuyamlutha ... kuyifumana). Inqaku elinye elipholileyo losetyenziso lweselfowuni kukuba unganalo ukubonisa amanqaku akho njengenombolo yokulumkisa kwi-app yona. Akunyanzelekanga ukuba uvule iapp ukuze uphinde ubone amanqaku akho!
Enye yezinto endizithandayo yinto eyenzekayo xa ndicofa kwenye iprofayile. Iphepha eliguqukayo ngokwenyani livelisa umzobo omnandi obonisa apho kufanelekileyo ukuba ndinxibelelane nomphembeleli, kweziphi izihloko, kunye nokubona ukuba yeyiphi intsholongwane esifana ngayo. Oku kuyamangalisa nakowuphi na umthengisi…. ukukwazi ukukhangela ngesihloko okanye ngempembelelo, kwaye uqonde ukuba kuphi kwaye njani unxibelelane naloo mphembeleli sisibonelelo esikhulu sokwandisa ukufikelela kwakho.
Ndingathanda ukubona iKlout ibonelela ngeengcebiso kwigridi yeendlela zeKlout. Ngelixa ndikonwabelayo ukubizwa ngokuba yiNkokeli ecingayo, ndingathanda ukubona ezinye zeengcebiso okanye ezona ndlela zilungileyo zokundinceda ndibenolungelelwano kwindlela endisebenzisa ngayo iinethiwekhi zentlalo… mhlawumbi ulwabelwano kunye nokuthatha inxaxheba. Andifuni ukuqhekeza inqaku lam leKlout, kodwa ndingathanda ukubona ukuba ndinokulungelelanisa indlela endiziphethe ngayo kwaye iKlout indixelele ukuba ayisebenzi okanye ayisebenzi.
Nantsi ividiyo yeKlout kumanqaku amatsha… kunye nemboniso yeKlout Moments eza kuqala kungekudala:
Inqaku leKlout okwangoku idibanisa imiqondiso engaphezu kwama-400 Ukusuka kwinethiwekhi ezisixhenxe ezahlukeneyo kwaye kusetyenzwa ngayo yonke imihla ukuvuselela amanqaku akho.
Ukukhankanywa: Ukukhankanywa kwegama lakho kwisithuba kubonisa umzamo wokuzibandakanya nawe ngokuthe ngqo.
Uthandayo: Eyona nto ilula ebonisa ukuzibandakanya nomxholo owenzileyo.
Amazwana: Njengempendulo kumxholo owabelana nawo, amagqabantshintshi abonisa ukubandakanyeka ngokuthe ngqo kwinethiwekhi yakho.
Ababhalisi: Inani lababhalisi yinkqubo eqhubekayo yempembelelo ekhula ngokuhamba kwexesha.
Izithuba zodonga: Izithuba eludongeni lubonisa zombini impembelelo kunye nokuzibandakanya.
Bahlobo: Ukubala kwabahlobo kulinganisa ukufikelela kwenethiwekhi yakho kodwa akubalulekanga kangako kunendlela inethiwekhi yakho esebenza ngayo nomxholo wakho.
Iimpinda: I-retweets yonyusa impembelelo yakho ngokuveza umxholo wakho kuthungelwano olwandisiweyo lwabalandeli.
Ukukhankanywa: Abantu abafuna ingqalelo yakho ngokukhankanya kuwe luphawu olomeleleyo lwempembelelo. Sikwathathela ingqalelo umahluko kwiindidi zokukhankanywa, kubandakanya "nge" kunye no "cc".
Dwelisa ubulungu: Ukubandakanywa kuluhlu olukhethwe ngabanye abasebenzisi kubonisa indawo zakho zempembelelo.
abalandeli: Inani labalandeli yenye yezinto kwiNqaku lakho, kodwa sithanda kakhulu ukubandakanyeka kubungakanani babaphulaphuli.
Uyaphendula: Iimpendulo zibonisa ukuba uhlala ubandakanyeka kwinethiwekhi kunye nomxholo womgangatho.
+1: Eyona nto ilula ebonisa ukuzibandakanya nomxholo owenzileyo.
Ukwabelana kwakhona: Ukwabelana kwakhona kwandisa impembelelo yakho ngokuveza umxholo wakho kuthungelwano olwandisiweyo kuGoogle +.
isihloko: Isihloko sakho esichaziweyo kwi-LinkedIn ngumqondiso wempembelelo yakho yokwenyani kwaye iyaqhubeka.
Uxhumo: Igrafu yakho yoqhagamshelo inceda ukuqinisekisa ifuthe lakho lokwenyani lehlabathi.
Abacebisi: Abacebisi kwinethiwekhi yakho bongeza imiqondiso eyongezelelweyo kwigalelo elenziwe yi-LinkedIn kwiNqaku lakho.
Iingcebiso zenziwe: Inani leengcebiso ozishiyileyo ezigqityiweyo zibonisa amandla akho okuphembelela abanye kumacala amane abonayo.
+ K ifunyenwe: Ukufumana + K kunyusa amanqaku akho eKlout ngesixa esifakwe kuyo yonke imijikelo yokulinganisa yeentsuku ezingama-90 ukukhusela ukuthembeka kwamanqaku.
Ukubaluleka kwephepha: Ukulinganiswa ngokusebenzisa i-PageRank algorithm ngokuchasene negrafu yephepha le-Wikipedia.
Inlinks ukuya kwi-Outlinks Ratio: Ukuthelekisa inani lamakhonkco angenayo kwiphepha ukuya kwinani lamakhonkco aphumayo.
Inani lee-Inlinks: Imilinganiselo yenani lilonke lonxibelelwano olungena kwiphepha.
I-Kudos kwiKlout yokuziphinda izenzele… ibijolise kakhulu kubantu beendaba zosasazo kule minyaka idlulileyo kodwa ndiyalithanda iqela labo (elaziwa njenge Iikllawlaw) basazama ukwenza indlela elula yokufumanisa kunye nokulinganisa ifuthe kwi-intanethi.
tags: ilinganiswa njani ikloutkloutamanqaku ekloutyintoni amanqaku eklout
Google: Isizinda esingezantsi okanye isiqulathi esingezantsi soLwimi oluninzi